Chigadzirwa Chitsva Chinobatsira Vanhu Nekusagadzikana Kwekudya Kunakidzwa Nekudya Zvakare
Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Chigadzirwa Chitsva Chinobatsira Vanhu Nekusagadzikana Kwekudya Kunakidzwa Nekudya Zvakare
5 min kuverenga
Kusashivirira Kwechikafu Kunoita Kuti Vazhinji Varege Kunakidzwa Nekudya. Intoleran's Enzyme-Yakavakirwa Zvigadzirwa Dzinodzokera Nekutsigira Digestive System.
Iyo yeDutch hutano brand Intoleran inonyatsoziva kuti vangani vanhu vanonetsekana nekusashivirira. Semuenzaniso, kusawirirana kwelactose - kusakwanisa kuputsa uye kunyatsochera shuga yemukaka, lactose - yakajairika. National Digestive Diseases Information Clearinghouse (kuburikidza neCornell University) inoshuma kuti vanosvika mamirioni makumi mashanu vekuAmerica vane lactose vasingashiviriri, uye mamiriro acho ari kunyanya kupararira pakati peAfrican American, American Indian, uye Asian American demographics.
Imwe ongororo yakataurwa neNIH inotaura kuti nyanzvi dzinofungidzira zvinoshamisa makumi matanhatu nesere muzana yehuwandu hwepasi rose vane lactose malabsorption. Nepo ivo chete avo vanonyatso ratidza zviratidzo vanoonekwa zviri pamutemo selactose isingashiviriri, kutyisidzira kwakapararira kwekunetseka kwekudya kwe lactose kunonyatso kupararira pasi rose. Kana zviratidzo zvikaitika, zvinogona kushungurudza zvakanyanya uye zvinogona kubva pakuputika uye gasi kusvika kumakumbo emudumbu, kusvotwa, uye kunyange manyoka uye kurutsa.
Uye ndicho chimwe chete, kusashivirira kumwe chete. Kunewo kusashivirira kwefructans uye galactans (zvakadai segariki, hanyanisi, uye gorosi) pamwe chete nefructose (funga nezvemichero nouchi) uye sucrose (yakanaka yechinyakare shuga kubva muzvinwiwa, zvihwitsi, uye sosi.) Zvakawanda zveizvi zvinonetsa mukugaya. inogona kugadziriswa nekudya kweFODMAP, iyo inobatsira vanhu kuwana nekudzora kuti ndezvipi zvekudya zvavanonzwa nazvo.
Kunyange zvazvo kudzora zvokudya zvomunhu kuchibatsira, kunyange zvakadaro, nokukurumidza kana kuti gare gare pachava nenguva apo munhu anonangana nokudya chimwe chinhu chaanoziva kuti chichamutapura. Kushanyira shamwari, kuenda kupati, kana kungodya kunze kunogona kutungamirira kuzvokudya zvishoma. Ndipo panouya Intoleran pamufananidzo.
Iyo yekucheka-kumucheto Dutch yekuwedzera brand yapedza makore anopfuura gumi ichikwenenzvera ayo enzyme-yakavakirwa zvigadzirwa. Izvi zvinogadzirisa kusashivirira kwataurwa pamusoro apa. Semuenzaniso, ine zvese Lactase Drops uye Kamwe-a-Zuva kubata lactose kusashivirira. Fructase inobatsira nekusagadzikana kwefructose. Iyo kambani yakatogadzira yayo itsva Quatrase Forte, iyo inogadzirisa zvakachengeteka kusashivirira kwakawanda panguva imwe chete. Izvi zvakasiyana-siyana zvezvipo zvinogadzirisa kusashivirira kwakasiyana kwakasiyana munyika yehutano.
Chinangwa cheIntoleran nechimwe nechimwe chezvigadzirwa zvachinogadzira ndechekusimbisa kugaya. Kazhinji, izvi zvinouya kuburikidza nekupa imwe yekuwedzera dosi yema enzymes ekugaya, ayo anonangidzirwa kune kumwe kusashivirira. Chero ma enzymes asingadikanwi nemuviri anogona kupfuura zvisina ngozi nemudumbu, zvichiita kuti zvigadzirwa zveIntoleran zvive nyore kuedza nazvo sevanhu vanoedza kutsvaga kusashivirira kwavanoda rubatsiro kugadzirisa. Pamusoro pezvo, kambani inoenda kumarwadzo makuru kushandisa zvigadzirwa zvishoma. Kudzivirirwa kwezvimwe zvisingakoshi zvekuwedzera kunovimbisa kuti zvigadzirwa zvinogona kushandiswa nevakawanda vateereri sezvinobvira.
Nepo Intoleran yakamboshanda misika yeEurope munguva yakapfuura, kambani iri mukati mekupinda muUS, zvakare. Sezvo zvigadzirwa zvaro zvichitenderedzwa mumusika wekuNorth America mumwedzi iri kuuya, Intoleran ichapa chishandiso chitsva, chine mushandisi-mushandisi kubatsira makumi emamiriyoni evaAmerica vari kunetsekana kubva mukusashivirira kuti vanakirwe nekudya kwavo zvechokwadi.
Kurapwa Kutsva Kwekufuta
Nyowani Scientific Zvishandiso zveProtein, Sero, uye Gene Therapy Developers
CDC yakasimbisa Kufamba kuenda kuBahamas Yakachengeteka kune vekuAmerica
Seychelles neClub Med Vanobatana Mukubudirira Kunyengedza...
South Korea: Zvizhinji zveCOVID-19 zvirambidzo zvichabviswa ...
Kurangarira Kwekudya: Mbeu dzePoppy nekuda kweSalmonella
Chiteshi chitsva chekutakura zvinhu neChina chinovhura pa...
Muhoro uye Pundutso Inokwidziridzwa nePamusoro Pesenger Demand...
Carnival yekutanga rwendo rwekufamba muUS kuti itangezve yese ...
Zvakaipisisa uye zvakanakisa-kukosha-kukosha kwevashanyi zvinokwezva munyika
Fifth Wheel Coupling Market yakamira kuti ikure pa5.7%.
Tanzania Inowana Gurukota Idzva rekushanya
European Aviation Safety Agency ikozvino inoda mask mandate ...
200 vanhu vakabviswa, vazhinji vakaiswa muchipatara mushure me...
Muedzo mutsva wekutarisa hutano mune post stroke uye TIA ...
Yese nyowani 2023 Kia Niro inoita yayo inogoneka kutanga
Titanium Dioxide Ruvara Musika Segmentation...
Chikwata cheBarbados Chinorova Ground Running paWTM LATAM
Finnair: Shanghai, Seoul ndege dzichiripo, Osaka uye ...
WTN inoombera Tsika Itsva yeMakambani Ekufambisa Kumira...
Muedzo weRopa Nyowani kufanotaura Chirwere cheAlzheimer
Russian Nazi Propaganda inopararira kuUS kubva kuCanada
New GM yakanzi Country Inn uye Suites naRadisson mu...
Blue Amber Zanzibar Resort: Gamba idzva remuAfrica...
IBC Rental Business Market 2022 Development Status...
Kubira kweSkyway: Russia inoba mazana emazana akarejeswa ...
Non-Agriculture Smart Irrigation Controllers Market...
Chengetedzo Tape Musika Kuongorora Uye Kudiwa Nekufanotaura ...
Ndege Kabhini Interior Market kuti iwedzere paCAGR ye...
Kusimudza Simba reKushanya: Sandals Resorts "40 For 40...
Muedzo wekiriniki wakatenderwa neFDA kune glioblastoma huropi ...
Mupepeti mukuru we eTurboNew ndiLinda Hohnholz. Iye anogara muTN HQ muHonolulu, Hawaii.